Waxa jira xisbiyo badan, kuwo wadankoo dhan ka hawlgala iyo kuwo degaan gaar ah ku eg, waxaa diiwaan gashan illaa 200 xisbi diiwaangashan. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waxa jira xisbiyo badan, kuwo wadankoo dhan ka hawlgala iyo kuwo degaan gaar ah ku eg, waxaa diiwaan gashan illaa 200 xisbi diiwaangashan.
Publicerat fredag 9 juni 2006 kl 14.10
XISBIGA SHAQAALAHA SOOSHIYAALDIMUQRAADKA
Xisbiga shaqaaluhu (socialdemokraterna) waa kan ugu weyn dalkan, waxana taageera qiyaastii10kii qofba 4. Xisbigan ayaa dalka xukumayey lagasoo bilaabo 1930aadkii marka laga reebo1976-1982 iyo 1991-1994. xisbigan fekerkiisa ayaa u dhexeeya hantiwadaag iyo hantigoosad – wuxuna isku miisaama daryeel bulsho iyo habdhaqaaleed furfuran iyadoo suuqa dhaqaaluhu u shaqeeyo si xor ah laakiin haddana dowladdu qayb libaax ka qaadato.
XISBIGA BIDIXDA (VÄNSTERPARTIET)
Xisbigan oo markii hore ahaa xisbiga hantiwadaagga,ayaa berisamaadkiisu ahaa 40- iyo 50naadkii, wuxuna heli jirey in kabadan 10% codka dadweynaha. Dabadeed xisbigu mudo dheer wuxu helijirey qiyaastii 4%, laakiin wuxu kor u kacay markuu iskudeyey iska tuuridda shaabbadda hantuwadaagga(kommuniststämpeln).inkastoo taasi dhib soo noqnoqda ku noqotay saamaysayna codbixiyeyaasha.
Xisbigan ayaa qaba in xornimada suuqa dhaqaalah la xakameeyo dowladduna awood weyn ku yeelato jihaynta iyo qorshaynta dhaqaale, laakiin waxa kale oo xisbigu beryahan ku cad cad yahay arimaha haweenka iyo daryeelka degaanka.
Xisbigani wuxu baarlamaanka soo galay 1994 illaa waagaasna wuxu saamayn ku yeeshay siyaasadda degaanka ee dowladda . Xisbiga waxa tageera 5 % laakiin wuxuu cayaaray door muhiim, isagoo noqday miisaanka baarlamaanka. Sanadahan wuxu doortay in uu lashaqeeyo dowladda, goolkiisuna waa bulsho ku dhisan dhawrid degaan iyadoo la adeegsanayo in laga qaado cashuur badan iyo kharash waxba wixii ay degaanka uga waxyeelo badanyihiin.
XISBIGA MOODARAADKA (MODARATERNA)
Xisbigani waa kan midigta oo dooddii adadkayd ku bedeley mid suuq dhaqaale oo dhexdhexaad ah. Xoriyadda shirkadaha, cashuur yar iyo saamaynta dhaqaale ee dowladda oo xadidan ayaa ah xisbiga fekradihiisa waaweyn. Sanadahan wuxu xisbigu hoos u dhigay codkiisii uu ku eedaynjirey awoodda ururada shaqaalaha iyo xeerka shaqada oo xisbigu u arko in ay yihiin kuwo aad u xoojiya awoodda shaqaalaha, dhib weynse ku haya dhaqdhaqaaqa suuqa shaqada. Xisbigu wuxu kale oo bilaabay in uu su’aalihiisa ku saleeyo dan bulsho.
Xisbigani waa xisbiga siyaasadda dhexe ee Iswidhan. Qoladan ayaa ku faanta in siyaasadoodu aduunka kaga guulaysatey kuwa hantiwadaagga iyo hantigoosadka. Layberaalka Iswidhan ayaa taageradiisa shacab hoosaysey sanado badan, laakiin dooradhadii 2002dii ayey kor u gaartey 13 %. Beryahan ayaa xisbiga siyaasadiisu tahay mid adadag oo xagga midigta u janjeerta, waxana ka mid ah shuruudo adadag oo lagu xidho ajnebiga iyo edebta iskuulada
XISBIGA DEMUQRAADIYADADA KIRISTANKA
Xisbigani waa mid aad u weyneeya dhaqanka soo jireenka ah (konservativ), iskuna daya in uu mideeyo suuq dhaqaale oo madaxbanaan iyo daryeelka bulshada inta tabarta daran. Xisbigu wuxu culayskiisa weyn saraa qoyska, wuxuna kasoo horjeedaa in ay isguursadaan dadka isku jinsiga ahi. Xisbigu wuxu wacdarihii ugu weynaa dhigay doorashadii 1998, oo helay 11 % codka dadweynaha, laakiin taageeradiisu wexey hoos u dhacday markii Alf Svensson oo xisbigu ku caanbaxay ka degey jagada gudoomiyenimo 2004.
Xisbigani waa kan dhaxlay xisbigii beeraleeyda, kaas oo hawshiisa weyni ahayd difaaca danta beeraleeyda. Xisbigan waxa berisamaadkiisu ahaa 1970dii oo madaxdiisu hogaaminayeen dhawr dowladood oo burjuwasi ah, laakiin taasi wexey aad ayey hoos ugu dhacday 20kii sano ee u dambayey. Fekredaha ugu waaweyni waa baahinta xukunka- horumarinta gobolada iyo bulshu wadanigu sida ugu badan ee suurtogal ah saamayn ugu yeelan karo go’aan gaarista. Daryeelka iyo dhawrista degaanka ayaa iyana xisbiga udubdhexaad u ah.
Sanadkan xisbiyo cusub ayaa doonaya in ay soo galaan baarlamaanka – waxana ugu waaweyn xisbiga Haweenka (feministiska initiativ) iyo liiska juuniyo (junilistan).
Danta xisbigani waa sare u qaadista sinaanta ragga iyo dumarka iyo in shafka dhulka loogu dhufto waxa loogu yeedho ”gaboodfalka ragga (patriakaret)” oo dhankan looga arko cudur bulshada oo dhan kujira kuna gaamurey. Hogaamiyaha xisbigu waa Gudrun Schyman oo ahayd hogaamiyihii hore ee xisbiga bidixda.
Liiska juuniyo waxa la assaasay wax yar ka hor codbixintii 2004tii ee baarlamaanka midowga Yurub (EU-parlamentet), wuxuna xisbigan oo midowga Yurub(EU) dhaleeceeyaa si lamafilaan ah uga helay doorashadaa 14%. Liiska juuniyo wuxuu si weyn u diidanyahay awoodaha badan ee go’aan gaarista ee Iswidhan ka wareegaya, laguna gaadhayo Bryssel oo xarun u ah EU. Wuxu xisbigani doonayaa in arimo dhawr ah cod dadweyne loo qaado.
Heerka dowladaha hoose waxaa ka jira xisbiyo kale oo aan halkan lagu magcaabin.Labada ugu tunka buuran oo dhawr gobol kuraas ku leh waa Daryeelka caafimaadka(Sjukvårdspartiet) iyo Hawlgabka(Pensionärpartiet). Dimuqraadiyiinta Iswidhan (Sverigedemokraterna) oo doorashadii u dambaysey kuraas ka helay dhawr degmo oo koonfurta dalka ah ayaa iminka ku hamiyaya in ay gaadhaan baarlamaanka.
XISBIGA DARYEELKA CAAFIMAADKA
Xisbig sidii xisbi degaan uga jira gobolo badan wuxu ku guulaystey in uu kuraas ka helo dhowr gobol. Hawsha guud ee xisbigan ayaa ah kor u qaadida daryeelka caafimaadka bulshada. Waxa dhowan la isku deyey laguna guuldaraystay in xisbiga laga dhigo mid qaran.
Dhawr gobol ayaa hawlgabku tiro yar oo kuraas ka heleen. Muhimmadda ugu weyn ee xisbigu waa nolol duqnimo oo haybad leh iyo udagaalanka danaha hawlgabka, sida in hawlgabku ka helaan golayaasha siyaasadda kuraasta ay xaqa u leeyihiin.